Kunetseka kwakati wandei kunoonekwa muLinux Kernel mu USB uye Wifi madhiraivha Marvell | Linux Vakapindwa muropa
Kunetseka kwakati wandei kunoonekwa muLinux Kernel muMarvell USB uye Wifi madhiraivha
Darkcrizt | | Updated on 29/08/2019 22:49 | Noticias
Uno imwe yengano dzinozivikanwa kwazvo pamambure nezveLinux ndiyo yakasarudzika "Linux yakachengeteka uye haina kukuvara", asi chinhu ndechekuti izvi manyepo zvachose sezvo zvese zvakakomba uye zvidiki zvipuka paLinux zvakaburitswa (kwete panguva ino asi mushure mekugadziriswa).
Uye yakadaro nyaya iyo nguva pfupi yadarika yakaburitsa nhau kuti hutatu hutatu hwakaonekwa mune mutyairi wemidziyo isina waya inoenderana neMarvell chips ( CVE-2019-14814, CVE-2019-14815, CVE-2019-14816) izvo zvinogona kutungamira kuti dhata inyorwe kunze kweyakagovaniswa bhafa kana uchigadzirisa zvakarongedzwa mapaketi akatumirwa kuburikidza netlink interface.
1 Nezve kushomeka kwaMarvell
2 Zvinodzvinyirirwa mumatyairi e USB
Nezve kushomeka kwaMarvell
Kana iri CVE-2019-14814 uku ndiko kufashukira mune mwifiex_set_uap_rates () basa Marvell Wifi mutyairi muLinux kernel
Dambudziko riri mukati mwifiex_set_uap_rates () mune madhiraivha /net/wireless/marvell/mwifiex/uap_cmd.c.
Kune maviri memcpy mafoni mune ino basa kuteedzera chinhu icho WLAN_EID_SUPP_RATES uye WLAN_EID_EXT_SUPP_RATES pasina kutarisa kureba. Iyo dst buffer bss_cfg-> mitengo ndeyehurefu hwehurefu MWIFIEX_SUPPORTED_RATES.
Zvinhu zviviri zviri mu cfg80211_ap_settings zvinobva kunzvimbo yemushandisi.
Panguva yenyaya ye CVE-2019-14815 uku kufashukira mu mwifiex_set_wmm_params () basa muLinux kernel
Dambudziko riri mukati mwifiex_set_wmm_params () mune madhiraivha / net / wireless / marvell / mwifiex / uap_cmd.c.
mwifiex_set_wmm_params () inodaidza memcpy kuteedzera iyo WLAN_OUI_MICROSOFT chinhu ku
bss_cfg-> wmm_info Pasina kutarisa kureba.
bss_cfg-> wmm_info ndiyo chimiro mwifiex_types_wmm_info mhando.
CVE-2019-14816 nenzira imwecheteyo seayo apfuura kufashukira kwemwifiex_update_vs_ie () mune linux kernel
Dambudziko riri mukati mwifiex_update_vs_ie () mune madhiraivha /net/wireless/marvell/mwifiex/ie.c.
mwifiex_set_mgmt_beacon_data_ies () parses beacon IEs, probe response IEs,
Cfg80211_ap_settings-> beacon association response IE, ichadaidza mwifiex_update_vs_ie () kaviri kune IEs yega yega kana IEs dziripo.
Zvemabacon_ies semuenzaniso, mukutanga kufona, mwifiex_update_vs_ie () govera wozoteedzera iyo WLAN_OUI_MICROSOFT chinhu kuna ie-> ie_buffer,
kureva-> ie_buffer irongwa hwehurefu IEEE_MAX_IE_SIZE (256); Parunhare rwechipiri, mwifiex_update_vs_ie () anoteedzera iyo WLAN_OUI_WFA chinhu chakambopihwa. Kana huwandu hwehurefu hwezvinhu zviviri hwakakura kupfuura IEEE_MAX_IE_SIZE, zvinokonzeresa bhajeti kufashukira.
Matambudziko inogona kushandiswa nemushandisi wemuno kukonzera kernel kuparara pane masystem anoshandisa Marvell wireless makadhi.
Iko mukana we izvo munhu ane chinangwa chakaipa anogona shandisa izvi kushomeka kuti uwedzere mikana yako pasystem.
Parizvino matambudziko aya anoramba asina kugadziriswa (kunyange hazvo iwo akatoburitswa mazuva akati wandei apfuura) mune zvakagoverwa (Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, SUSE).
Kunyangwe chigamba chatove chakarongerwa kuiswa muLinux Kernel kune inotevera
Zvinodzvinyirirwa mumatyairi e USB
Andrey Konovalov weGoogle akawana kusagadzikana gumi neshanu mumatyairi eUSB inopihwa muLinux kernel.
Uyu ndicho chikamu chechipiri chematambudziko akasangana panguva yekuyedza kwekuyedza: muna 2017, Uyu muongorori akawana zvimwe zvinonamira gumi nematanhatu mudura re USB.
Matambudziko dzinogona kuve dzinogona kushandiswa kana zvakanyatsogadzirirwa USB zvishandiso zvakabatana nekombuta.
Kurwisa eIzvo zvinokwanisika kana paine mukana wekuwana kune komputa uye inogona kukonzeresa imwechete kernel kupunzika asi kumwe kuratidzwa hakusi kubviswa (semuenzaniso, nekuda kwekushupika kwakafanana kwakaratidzwa muna 2016, mutyairi weUSB snd-usbmidi akakwanisa kugadzirira kushandisa kuita kodhi padanho rekernel).
Pamatambudziko gumi neshanu, gumi nematatu yakatogadziriswa mune yazvino Linux kernel inogadziridza, Asi kusagadzikana kweviri (CVE-2019-15290, CVE-2019-15291) inoramba isina kugadziridzwa mune yazvino vhezheni 5.2.9.
Unpatched kudzvinyirira kunogona kutungamira kuNULL pointer kurekodha mune ath6kl uye b2c2 madhiraivha pavanogamuchira isiriyo data kubva kuchinhu.
Zvimwe zvinokuvadza zvinosanganisira:
Kuwanika kwenzvimbo dzekurangarira dzakatoburitswa (use-after-free) mune madhiraivha v4l2-dev / radio-raremono, dvb-usb, kurira / musimboti, cpia2 uye p54usb;
Kaviri yemahara ndangariro (yakapetwa mahara) mune iyo rio500 controller;
NULL pointer dereference mu yurex, zr364xx, siano / smsusb, sisusbvga, line6 / pcm, motu_microbookii, uye line6 driver.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kunetseka kwakati wandei kunoonekwa muLinux Kernel muMarvell USB uye Wifi madhiraivha
Yakatangisa yechina yekutarisa vhezheni yeWindows Terminal
Maitiro Ekuchengeta Mapeji eWebhu ekuverenga Kwepamhepo nenzira Dzisiri Nyore